कोभिड-१९ बुधबार, वैशाख २४, २०७७
“म कुन्ता थापा अहिले काठमाडौं, कपनमा बस्छु। ब्याङ्कमा काम गर्ने भएकाले अफिस सधैं जानुपर्छ। अफिसमा स्यानिटाइजर, मास्क र पञ्जा अनिवार्य प्रयोग गर्छौं। ब्याङ्कमा पैसाको कारोबार त हुने नै भयो। सेवाग्राहीले दिएको चेक र पैसामा पनि स्यानिटाइजर लगाएर मात्रै लिन्छौं।
घरमा म, श्रीमान् र छोरा गरी तीन जनाको परिवार छ। श्रीमान्‌को स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको धेरै वर्ष भयो। उहाँका लागि दैनिक औषधि चाहिन्छ। खाद्यान्न अलि समयका लागि जोहो गरेको भए पनि औषधि किन्न पाइएला भनेर धेरै किनिएन। उहाँले प्रयोग गर्ने औषधि सकियो। मैले कपनमा भएका तीन–चार वटा औषधि पसलमा खोजें कतै पाइनँ। पछि अनलाइन अर्डर गरेर औषधि लियौं।
घर बाहिर निस्केर हिंड्न पनि डराउनुपर्ने दिन आयो । हुनत आफ्नो लागि डराउनुपर्ने हो। आफ्नो नै हेरचाह गर्नुपर्ने हो। तर घरी–घरी आफ्नो ख्याल गर्ने सुरमा हामीले मानवता नै भुल्न लागेछौं कि जस्तो लाग्छ।
छिमेकमा अलि दिन अगाडि शोक पर्‍यो। अस्पतालमा उपचारका क्रममा छिमेकीको मुटु रोगका कारण मृत्यु भयो। दुई छोराहरू अमेरिका बस्ने । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको हुनाले उनीहरू नेपाल आउन सम्भव भएन। लकडाउनले गर्दा धरानमा रहेका उहाँका अरू आफन्त पनि लाश उठाउन आइपुग्न सक्नुभएन।
हामी यहीं छत जोडिएका छिमेकी अस्पतालसम्म पुगेर आर्यघाट जान निकै समस्या भयो। अस्पतालमा उहाँकी श्रीमती र छोरी–ज्वाईं मात्रै। लाश उठाउने मान्छे भएनन् भनेर अस्पतालबाट फोन आयो। रोगसँग डर छ भन्दैमा मर्दा–पर्दा सहयोग नगर्न नि त भएन !
‘मर्दा–पर्दाको छिमेकी’ उखानै छ, कहाँ गयो ? मरेको वेलामा सहयोग नगर्ने नि के छिमेकी भनेर मैले अस्पताल जाने निर्णय गरें । त्यसपछि भने छिमेकका अरू ७–८ जना पनि जान तयार हुनुभयो। बेलुकाको समय थियो। हामीले गएर अन्त्येष्टि गर्‍यौं।
कोरोनाका कारण हामीले यस्तो दिन पनि देख्नु र भोग्नुपर्‍यो। आशा गरौं, यो संकट छिट्टै नै टर्नेछ।”